FUNDA NGOLUNYE ULWIMI IPidgin yaseSolomon Islands ISepedi ISpanish Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBasque IsiBhulu IsiBislama IsiCatalan IsiChichewa IsiChol IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFante IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiGun IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKannada IsiKikamba IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKongo IsiKorea IsiKrio IsiLithuania IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMaya IsiMingrelian IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNgesi IsiNorway IsiOromo IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPhuthukezi(sasePortugal) IsiPolish IsiPunjabi IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTahiti IsiTarascan IsiTelugu IsiTigrinya IsiTlapanec IsiTojolabal IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUrdu IsiUzbek IsiValencian IsiWelsh IsiXhosa IsiZulu isiZapotec (saseIsthmus)
NgoMgqibelo, ngoMatshi 1, 2014, kwakuhlanganisene inginginya yabantu abayi-823 kwiHolo yeNdibano yamaNgqina kaYehova yeSixeko saseBenin eNigeria beze kuncoma imigudu eyenziweyo yolwakhiwo lweeholo. Ukususela ngo-1999 kuye kwakhiwa iiHolo zoBukumkani eziyi-3 000 oko amaNgqina kaYehova aqalisa ukunceda amazwe angathathi ntweni.
Ngaphambi kokuba yakhiwe
Kule ntlanganiso kwathethwa ngamahlandinyuka okukhangela iindawo zokungenela iintlanganiso eNigeria ukususela ngeminyaka yee-1920. Ekuqaleni kwakusetyenziswa amakhaya nezakhiwo eziqeshisayo. Isakhiwo sokuqala amaNgqina ayengenela kuso malunga nonyaka ka-1935 sikwisixeko saseIlesa. Ukususela ngo-1938 ukuya ku-1990 amabandla anda kakhulu ukususela kwayi-14 aya kutsho kwayi-2 681 yaye amaninzi awo awanazakhiwo. Ngezinye izihlandlo, iholo elinye lalide lisetyenziswe ngamabandla amathandathu. Ngamanye amaxesha abantu babeyizalisa ime ngeembambo iholo kufuneke abanye bahlale phandle bajonge ezifestileni. Amabandla amaninzi asahlanganyela emakhayeni abantu okanye ezikolweni.
Xa sele igqityiwe
Ngo-1990 iofisi yesebe yamaNgqina kaYehova yaqalisa ukuba nengxowa yemali eyiboleka amabandla ukuze akhe iiholo. Kuthe kubetha unyaka ka-1997 zabe iiKomiti Zokwakha Zenqila sele zincede amabandla ayi-105 ukuba akhe okanye alungise iiholo zawo. Kwakhiwa iiholo eziyi-13 phakathi konyaka ka-1997 noka-1999 yaye zathatha iintsuku ezisixhenxe ukuya kweziyi-15 ukugqitywa.
IiHolo zamaNgqina kaYehova ezazikho eNigeria zazingonelanga ngenxa yenani elintingayo labavakalisi. NgoAprili 1998 iofisi yesebe yaqikelela ukuba kufuneka iiHolo zoBukumkani eziyi-1 114.
UDon Trost weKomiti yeSebe eNigeria wathi: “Wawungeyondlwan’ iyanetha lo msebenzi, sasizibuza ukuba siza kuwenza njani.” Kodwa ke, ekuqaleni konyaka ka-1999 yafumaneka impendulo, ngoba kwaqaliswa amaqela amathandathu okwakha iiHolo zoBukumkani. Kule minyaka iyi-14 idluleyo aye akha iiholo ezimalunga neziyi-2 856.
UMzalwan’ uTrost wathi kusekuninzi ekusafuneka kwenziwe. Ebudeni buka-2013 amaNgqina kaYehova aseNigeria aye anda nge-8 000. Lo kaTrost wathi: “Kusafuneka ezinye iiHolo zoBukumkani eziyi-100 nyaka ngamnye.” Ngonyaka ka-2013 inani lamaNgqina aseNigeria beliyi-351 000 yaye akumabandla ayi-5 700.